Support Group အရင်းအမြစ်များ
အောက်တွင် Chairpeople နှင့်ကော်မတီများထိရောက်သောပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များကို run ကူညီရန်အချို့အရင်းအမြစ်များကိုဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားစာရွက်စာတမ်းများအွန်လိုင်းကြည့်ရှုအားပေးသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်များနှင့်ပုံနှိပ်နိုင်ပါသည်။
ဥက္ကဋ္ဌအခန်းက္ပဖျေါပွခကျြမြားနှငျ့သဘောတူညီချက် (pdf) – Read and sign and return to SarcoidosisUK.
ကုန်ကျစရိတ် Template (သမ်မာကမျြး - တည်းဖြတ်) – Fill out and return to SarcoidosisUK to be reimbursed for expenses.
စီမံခန့်ခွဲမှုစစ်ဆေးရမဲ့စာရင်းပါ (pdf) – To help manage and organise your meetings.
လက်မှတ်အလုပ်ရှင်များ၏တာဝန်ဝတ္တရားအာမခံပါ (pdf) ၏မိတ္တူ – For reference only.
နယူးအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်မယ်စာရွက် (pdf) – Print for new members to use at meetings.
တက်ရောက်သူစာရွက် (pdf) – Print and use at meetings to keep track of attendance.
ဥက္ကဋ္ဌမှတ်စုများနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးကိုအစီအစဉ် (pdf) – Use for guidance when holding your first meeting.
ဥက္ကဋ္ဌမှတ်စုများနှင့်အတူအထွေထွေအစည်းအဝေးအစီအစဉ် (pdf) – Use for guidance with ongoing meetings.
ဥက္ကဋ္ဌမှတ်စုများနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးအစီအစဉ် (နှုတ်ကပတ်တရားတော် - တည်းဖြတ်) – You may wish to personalise your agenda, and can do so with this editable version.
ဥက္ကဋ္ဌမှတ်စုများနှင့်အတူအထွေထွေအစည်းအဝေးအစီအစဉ် (နှုတ်ကပတ်တရားတော် - တည်းဖြတ်) – You may wish to personalise your agenda, and can do so with this editable version.
SarcoidosisUK ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များ - Submit အစည်းအဝေးသတင်းအချက်အလက်
သင့်ရဲ့အခန်းက္ပ သင့်ရဲ့အခန်းက္ပဥက္ကဋ္ဌ / စည်းရုံးရေးမှူးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်SarcoidosisUKအခြား
တည်နေရာတွေ့ဆုံ တည်နေရာတွေ့ဆုံဗဟိုလန်ဒန်Bristol ကCornwall and Devon (CADS)Scotland North (Aberdeen/Perth/Dundee)Scotland South (Glasgow/Scotland/Stirling)မြောက်အမေရိက KentBurton-on-TrentHampshire ပြည်နယ်ဘဲလ်ဖတ်SuffolkLeedsBirminghamLiverpoolCoventry
အစည်းအဝေးတစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုခဲ့သလား အစည်းအဝေးတစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုခဲ့သလား ဟုတ်ကဲ့ - ထူးဆန်းသော! အများအားဖြင့် - လက္ခဏာနှင့်ဆိုးကျိုးရှိကြ၏ အဘယ်သူမျှမ - ကခက်ခဲအစည်းအဝေးခဲ့သည် (မှတ်ချက် box ထဲမှာကိုဖော်ပြရန်ကျေးဇူးပြုပြီး) အခြား